(WAR)-27/11/2021-Sabti-UK-Ra’isulwasaaraha Biritain Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay in dib loo soo celiyey xirashada af-daboolka marka lagu jiro dukaamada iyo goobaha ganacsiga ama la saaran yahay gaadiidka dadweynaha.
Tallabadaan ayaa ka dambeysay ka dib markii laga helay laba qof oo UK ku nool xanuunka Cronavirus faraciisa cusub ee OMICRON.
Raiisulwasaraha ayaa sheegay in laga bilaabo iminka uu yahay qasab in la xirto waji-Daboolka si loo xakameeyo in xanuunku mar kale faraha ka baxo.
Saynisyahanada ayaa sheegay in faracaan cusubi yahay mid adkeeysi u leh talaalka.
Todobaadkaan dhexdiisa ayeey ahayd markii 7 wadan oo qaaradda Afrika ka tirsan lagu daray liiska cas, lana joojiyey in laga soo socdaalo ama loo socdaalo, halka faraca cusub ee covid-19 nagu sheegay in uu ka soo hayaamay qaaradda Afrika.
Previous Dufaanta Arwen ayaa dishay qofkii saddexaad:
Next Bangi si kam ah ku bixiyey 130Milyan: